🥇 ▷ Apple wuxuu la shaqeeyaa ID Aqoonsi cusub oo loogu talagalay xaqiijinta shaashadda ee iPhone 12 ✅
Apple wuxuu la shaqeeyaa ID Aqoonsi cusub oo loogu talagalay xaqiijinta shaashadda ee iPhone 12
Qoyskan iPhone 11 ayaa lagu wadaa in dunida la soo bandhigo Talaadada soo socota (10), laakiin inta badan suuqa ayaa durbaba indhaha ku haya tillaabooyinka xiga ee Apple. Tani waa sababta Bloomberg ay maanta (5) uga dhawaaqday xanta ku saabsan iPhone 12, oo aan la sii deyn doonin illaa 2020.
Sida laga soo xigtay ilo warshadeed, Apple wuxuu horeyba uga shaqeynayey sameynta nooc cusub oo ah “ID ID” oo loogu talagalay aaladaha sanadka soo socda. Fikradda ayaa ah in la raaco heerka warshadaha ee Android lagana geliyo akhristaha farta-farta ka hooseysa muuqaalka OLED.
Sidaa darteed, fikradda shirkadda ayaa ah in aaladda ay leedahay laba habab oo xaqiijin ah, maaddaama Face ID sii jiri doono oo la sii xoojin doono. Macluumaadkaan wuxuu la jaan qaadaya saadaalin ay sii deysay Ming-Chi Kuo oo caan ah.
Si kastaba ha noqotee, Kuo lambarka cusub ee loo yaqaan “Touch ID ID” ayaa laga yaabaa inuu daaho oo lagu sameeyo rasmi rasmi kaliya 2021 taleefanno ah. Apple waxay tijaabineysaa teknolojiyadeeda alaab-qeybiyeyaasha, laakiin weli diyaar uma ahan soosaar ballaaran:
Ganacsadeyaashu waxay caddeeyeen awooddooda ah inay tikniyoolajiyadda ku dhex daraan iPhones, laakiin shirkadda ayaan wali awoodin inay soo saarto. Hadafku waa in la gaarsiiyo Kheyraadka marka la gaaro 2020, laakiin jadwalka ayaa dib loo dhigi karaa illaa 2021, ayuu yiri Bloomberg.
Si ka duwan xalalka hadda jira ee loo adeegsado aaladaha Android, Apple wuxuu doonayaa inuu keeno akhristaha dhijitaalka ah oo isku dhafan inta badan muujinta iPhones. Sidaa darteed, fikradda ayaa ah in la bixiyo aqoonsiga macaamilka meelo kala duwan oo shaashadda ah isla markaana la kordhiyo saxnaanta tikniyoolajiyadda.
Ugu dambeyntiina, ilo cusub ayaa sidoo kale sheeganaya in Apple ay tahay inay soo saarto iPhone ka jaban si uu ugu guuleysto iPhone SE. Qalabkaani waa inuu lahaadaa jirka iPhone 8 iyo 4.7 inji, laakiin hore u soo qaad aqoonsiga ‘ID Touch’ ee caadiga ah.